Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.4.2 Non-puru omume samples: weighting
Na-abụghị nke puru omume samples, igwe nwere ike idozi nsogbu distortions mere site ẹkekerede ụfọdụ usoro.
N'otu ụzọ ahụ na-eme nnyocha buo ibu Ibọrọ si puru omume samples, ha nwekwara ike ibu Ibọrọ si na-abụghị nke puru omume samples. Dị ka ihe atụ, dị ka onye ọzọ na CPS, were ya na ị enịm ọkọlọtọ mgbasa ozi na ọtụtụ puku weebụsaịtị aka n'oru sonyere maka a nnyocha e mere na-eme atụmatụ na-enweghị ọrụ ọnụego. O kwesịrị ịdị, ị ga-enwe obi abụọ na ndị dị mfe pụtara nke gị sample ga-abụ ezigbo atụmatụ nke na-enweghị ọrụ ọnụego. Gị Obi abụọ dị ike ịbụ na unu na-eche na ụfọdụ ndị na-yikarịrị ka mezue gị nnyocha e mere karịa ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, ndị na-adịghị anọ a otutu oge na weebụ bụ obere yiri ka mezue gị nnyocha e mere.
Dị ka anyị hụrụ ikpeazụ ngalaba, Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị maara otú ihe sample a họọrọ-dị ka anyị ga-eme gbasara nke puru omume samples-mgbe ahụ anyị pụrụ idozi nsogbu distortions mere site nlele usoro. O di nwute na, mgbe na-arụ ọrụ na-abụghị nke puru omume samples, anyị amaghị otú sample e họrọ. Ma, anyị nwere ike ime ka echiche banyere ụfọdụ usoro wee tinye weighting ke otu ụzọ. Ọ bụrụ na ndị a echiche ndị ziri ezi, mgbe ahụ weighting ga-edozi nsogbu ndị distortions mere site nlele usoro.
Dị ka ihe atụ, were ya na omume gị ọkọlọtọ mgbasa ozi, ị recruited 100,000 zaghachirinụ. Otú ọ dị, unu adịghị ekwere ihe ndị a na 100,000 ndị zaghachirinụ bụ ndị a mfe random sample nke American okenye. N'ezie, mgbe ị na-atụnyere gị zaghachirinụ na US bi, ị na-ahụ na ndị mmadụ si ụfọdụ na-ekwu (eg, New York) bụ n'elu-anọchi anya nakwa na ndị mmadụ si ụfọdụ na-ekwu (eg, Alaska) bụ n'okpuru-anọchi anya. N'ihi ya, na-enweghị ọrụ ọnụego nke gị sample nwere ike ịbụ a ọjọọ atụmatụ nke na-enweghị ọrụ ọnụego ke iche bi.
Otu ụzọ isi megharịa distortion ndị mere n'oge ụfọdụ usoro bụ ekenye igwe ka onye ọ bụla; ala igwe ka ndị mmadụ si na-ekwu na-n'elu-anọchi anya ndị sample (eg, New York) na elu igwe ndị si ekwu na-n'okpuru-anọchi anya na sample (eg, Alaska). More kpọmkwem, na ibu ibu nke ọ bụla respondent na-metụtara ha njupụta na gị sample ikwu na ha juru ebe niile na United States bi. Nke a weighting usoro a na-akpọ post-stratification, na echiche nke erikpu kwesịrị ichetara gị ihe atụ ná Nkebi 3.4.1 ebe zaghachirinụ si Rhode Island E nyere obere ibu ibu karịa ndị zaghachirinụ si California. Post-stratification-achọ ka ị maara iji tinye gị zaghachirinụ n'ime dị iche iche na ịma nkezi nke lekwasịrị bi nke ọ bụla otu.
Ọ bụ ezie na weighting nke puru omume sample na nke na-abụghị nke puru omume sample bụ otu mathematically (lee oru odide ntụkwasị), ha na-arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na ndị na-eme nchọpụta nwere a zuru okè nke puru omume sample (ie,-enweghị oti mkpuchi njehie na ọ dịghị ndị na-abụghị omume), mgbe ahụ, weighting ga-emepụta ebinyeghị akụkụ ọ bụla atụmatụ maka ihe nile àgwà mgbe nile. Nke a siri ike usoro iwu nkwa bụ ya mere na-akwado ihe gbasara nke puru samples-ahụ na ha mere mara mma. N'aka nke ọzọ, weighting na-abụghị nke puru omume samples ga na-emepụta ebinyeghị akụkụ ọ bụla atụmatụ maka ihe nile àgwà ma ọ bụrụ na nzaghachi ọchịchọ ebumpụta ụwa nke bụ otu n'ihi na onye ọ bụla nke ọ bụla otu. Ndị ọzọ okwu, na-eche ka anyị ihe atụ, iji post-stratification ga-emepụta ebinyeghị akụkụ ọ bụla atụmatụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na New York nwere otu nke puru omume nke na-ekere òkè na onye ọ bụla na Alaska nwere otu gbasara nke puru omume na-ekere òkè na na. A ọtụtụ ndị chere a na-akpọ homogeneous-eme ọchịchọ ebumpụta-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere, ọ keere òkè bụ isi na-amara ma ọ bụrụ na post-stratification ga-arụ ọrụ nke ọma na-abụghị nke puru omume samples.
N'ụzọ dị mwute, anyị na ihe atụ, homogeneous-eme ọchịchọ ebumpụta-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere yighị eziokwu. Ya bụ, o yiri eleghi anya na onye ọ bụla na Alaska nwere otu ihe gbasara nke puru idi na gị nnyocha e mere. Ma, e nwere ihe atọ dị mkpa iburu n'obi banyere post-stratification, nile nke ime ka o yie ihe ekwe.
Akpa, homogeneous-eme ọchịchọ ebumpụta-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere aghọ ndị ọzọ ezi uche dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị dị iche iche na-abawanye. Na, na-eme nnyocha na-ejedebeghị na ìgwè dị iche iche dị nnọọ dabeere na otu ala akụkụ. Dị ka ihe atụ, anyị nwere ike mepụta dị iche iche dabeere na ala, afọ, mmekọahụ, na larịị nke muta. O yiri ihe ezi uche na e nwere homogeneous omume ọchịchọ ebumpụta n'ime ìgwè nke 18-29, nwanyị, mahadum bi na Alaska karịa n'ime ìgwè nke ndị niile bi na Alaska. N'ihi ya, dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị dị iche iche ji mee ihe maka post-stratification na-abawanye, na inwe echiche ndị dị mkpa iji na-akwado ya ka ihe ezi uche. Nyere a, o yiri ka a na-eme nnyocha ga chọrọ ike a nnukwu ọnụ ọgụgụ iche iche maka post-stratification. Ma, dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị dị iche iche na-abawanye, na-eme nnyocha na-agba n'ime a iche iche nsogbu: data sparsity. Ọ bụrụ na e nwere nanị mmadụ ole na ole ndị nke ọ bụla otu, mgbe ahụ atụmatụ ga-abụ ihe na-ejighị n'aka, na nke ukwuu bụrụ na ebe e nwere otu ìgwè nke na-enweghị zaghachirinụ, mgbe ahụ, post-stratification kpamkpam mgbari. E nwere ụzọ abụọ a pụọ ​​pụta ụwa erughị ala n'etiti plausibility nke homogeneous- omume-propensity-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere na ina ezi uche sample nha nke ọ bụla otu. One obibia bụ ịkwaga a ọzọ ọkaibe mgbakọ na mwepụ nlereanya ka ịgbakọ igwe ma onye nke ọzọ na-anakọta a ka ibu, ihe iche iche sample, nke enyere hụ ezi uche sample nha nke ọ bụla otu. Na, mgbe ụfọdụ, na-eme nnyocha na-eme ma, dị ka m na-akọwa n'uju n'okpuru.
A abụọ echiche mgbe-arụ ọrụ na post-stratification si na-abụghị nke puru omume samples bụ na homogeneous-omume-propensity-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere a na-ama ugboro ugboro mere mgbe ị na-atụle ihe gbasara nke puru samples. Ihe mere na a ọtụtụ ndị chere dị mkpa n'ihi na ihe gbasara nke puru samples na omume bụ na ihe gbasara nke puru samples nwere ndị na-abụghị omume, na ọtụtụ nkịtị usoro nke nyesịrị ohere maka ndị na-abụghị omume bụ post-stratification dị ka akọwara n'elu. N'ezie, na ọtụtụ ndị na-eme nnyocha mee ka a ụfọdụ ọtụtụ ndị chere apụtaghị na ị ga-eme ya oke. Ma, ọ pụtara na mgbe atụnyere ndị na-abụghị nke puru omume samples ka puru omume samples na omume, anyị ga-eburu n'uche na ma-adabere na ya inwe echiche na inyeaka ozi iji na-emepụta atụmatụ. Na ọtụtụ ezi uche ntọala, e nweghị nnọọ ọtụtụ ndị chere-free obibia inference.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eche banyere otu atụmatụ e mere akpan akpan-in anyị ihe atụ na-enweghị ọrụ ọnụego-ahụ gị mkpa a ọnọdụ ike ọgwụgwụ ka homogeneous-omume-propensity-n'ime-otu ọtụtụ ndị chere. Kpọmkwem, ọ dịghị unu mkpa iche na onye ọ bụla nwere otu nzaghachi propensity, gị na mkpa iche na e nweghị mmekọrịta dị n'etiti nzaghachi propensity na-enweghị ọrụ ọnụego n'ime ọ bụla otu. N'ezie, ọbụna nke a na-adịghị ike ọnọdụ gaghị n'ọnọdụ ụfọdụ. Dị ka ihe atụ, were ya estimating nkezi nke ndị America na-eme ọrụ afọ ofufo. Ọ bụrụ na ndị na-eme ọrụ afọ ofufo na-yikarịrị ka ekweta na-na a nnyocha e mere, mgbe ahụ, na-eme nnyocha ga n'usoro n'elu-ekwu na ego nke ọrụ afọ ofufo, ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-eme post-stratification mgbanwe, n'ihi na e gosiri empirically site Abraham, Helms, and Presser (2009) .
Dị ka m kwuru na mbụ, na-abụghị ihe gbasara nke puru samples na-ele ya anya na oké skepticism site na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, na akụkụ n'ihi ọrụ ha rụrụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ihere emeghị nke ọma na mmalite nke nnyocha e mere nnyocha. A doro anya ihe atụ nke otú dị nnọọ ka anyị bịa na-abụghị nke puru omume samples bụ research nke Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel, na Andrew Gelman na n'ụzọ ziri ezi natara pụta nke 2012 US ntuli aka site na iji a na-abụghị ndị ihe gbasara nke puru sample nke American Xbox ọrụ -nke bụ na o na-abụghị random sample nke ndị America (Wang et al. 2015) . The eme nnyocha recruited zaghachirinụ si Xbox Ịgba Cha Cha usoro, na dị ka ị pụrụ ịtụ anya ya, na Xbox sample skewed nwoke na skewed-eto eto: 18 - 29 afọ nọ n'agbata-eme ka elu 19% nke onu ma 65% nke Xbox sample na ndị ikom eme ka elu 47% nke onu na 93% nke Xbox sample (ọgụgụ nke 3.4). N'ihi ihe ndị a siri ike omume igwe mmadụ biases, ọnyá ọhụrụ Xbox data bụ a ogbenye egosi ntuli aka alaghachi. Ọ buru amụma a siri ike mmeri maka Mitt Romney n'elu Barack Obama. Ọzọ, nke a bu ihe atu na ihe ize ndụ nke ndu, unadjusted na-abụghị nke puru omume samples na bụ reminiscent nke edemede Digest fiasco.
Ọgụgụ 3.4: Demographics nke ndị kwuru na Wang et al. (2015) . N'ihi na zaghachirinụ e recruited site na Xbox, ha bụ ndị ọzọ yiri ka na-eto eto na ndị ọzọ yiri ka nwoke, ikwu Ntuli Aka na 2012 nhoputa ndi ochichi.
Otú ọ dị, Wang na ibe maara nsogbu ndị a na nwara buo ibu nke ndị zaghachiri iji dozie maka nlele usoro. Karịsịa, ha na-eji a ọzọ ọkaibe ụdị nke post-stratification m gwara gị banyere. Ọ bụ uru na-amụta a bit ihe banyere ha ịzụ n'ihi na ọ na-ewuli nsinammuo banyere post-stratification, na karịsịa version Wang na ndị ọrụ ibe ji mee ihe bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali-abịaru nso ka weighting na-abụghị nke puru omume samples.
Anyị mfe atụ banyere estimating enweghị ọrụ ná Nkebi 3.4.1, anyị kewara ndị bi n'ime ìgwè dị iche iche dabeere na steeti obibi. N'ụzọ dị iche, Wang na ndị ọrụ ibe kewara ndị bi n'ime n'ime 176.256 dị iche iche kọwara mmadụ ndị a: okike (2 ige), agbụrụ (4 ige), afọ (4 ige), agụmakwụkwọ (4 ige), ala (51 ige), party ID (3 ige), echiche ndị Nazi (3 ige) na 2008 votu (3 ige). Na ihe dị iche iche, ndị na-eme nnyocha na-ele anya na ọ ga-esiwanye ike ịbụ na n'ime otu otu, nzaghachi propensity bụ uncorrelated na nkwado maka Obama. Next, kama oru ha n'otu n'otu-larịị igwe, dị ka anyị mere na anyị atụ, Wang na ndị ọrụ ibe ji mee ihe a mgbagwoju nlereanya na-eme atụmatụ ka ọnụ ọgụgụ ndị nke ọ bụla otu nke ga-votu maka Obama. N'ikpeazụ, ha jikọtara ndị a otu atụmatụ e mere nke support na mara size nke ọ bụla otu na-emepụta ihe e mere atụmatụ ịbụ n'ozuzu larịị nke support. Ya bu, ha kpọwa ndị bi n'ime dị iche iche dị iche iche, na-eme atụmatụ nkwado maka Obama nke ọ bụla otu, ma mesịa kpọrọ a dara nha nkezi nke ìgwè atụmatụ e mere na-emepụta onye na mkpokọta atụmatụ.
N'ihi ya, nnukwu ihe ịma aka-ha ime bụ ibu ụzọ na-eme atụmatụ nkwado maka Obama na onye ọ bụla n'ime ndị a 176.256 dị iche iche. Ọ bụ ezie na ha panel gụnyere 345.858 pụrụ iche sonyere, a nnukwu ọnụ ọgụgụ site ụkpụrụ nke ntuli aka polling, e nwere ọtụtụ ndị, ọtụtụ ìgwè dị iche iche nke Wang na ibe nwere fọrọ nke nta ọ bụla zaghachirinụ. Ya mere, na-ekwu na nkwado nke ọ bụla otu ha na-eji a Usoro a na-akpọ dọba nlaghachi azụ na post-stratification, nke na-eme nnyocha ịhụnanya na-akpọ Mr. P. N'ụzọ bụ, ka atụmatụ nkwado maka Obama n'ime a kpọmkwem otu, Mr. P. ọdọ mmiri ọmụma si ọtụtụ njikọ chiri anya dị iche iche. Dị ka ihe atụ, tụlee ihe ịma aka nke estimating nkwado maka Obama n'etiti ndị inyom, Hispanics, n'etiti 18-29 afọ, bụ ndị mahadum, onye na-aha Democrats, onye onwe mata dị ka moderates, na onye tozuru oke maka Obama na 2008. Nke a bụ a nnọọ, nnọọ kpọmkwem otu, ma ọ bụ ike na ọ dịghị onye na sample na ndị a mara. Ya mere, iji mee ka atụmatụ ndị e mere banyere otu a, Mr. P. ọdọ mmiri ọnụ na-eme atụmatụ si ndị mmadụ na yiri nnọọ iche iche.
Na iji analysis atụmatụ, Wang na ndị ọrụ ibe bịara nwee ike iji ngwaọrụ Xbox abụghị ihe gbasara nke puru sample ka anya na-eme atụmatụ na n'ozuzu support na Obama natara na 2012 nhoputa ndi ochichi (ọgụgụ 3.5). N'eziokwu ha kwuru bụ ihe ezi karịa ihe nchịkọta nke ọha na eze ntuli aka. N'ihi ya, na nke a, weighting-kpọmkwem Mr. P.-yiri ka eme ezi ọrụ a na-agbazi ndị biases na-abụghị nke puru omume data; biases na-ahụ anya mgbe ị na-eme atụmatụ, si unadjusted Xbox data.
Ọgụgụ 3.5: Atụmatụ e mere na site Wang et al. (2015) . Unadjusted Xbox sample emepụta etịbe atụmatụ. Ma, ndị dara nha Xbox sample emepụta kwuru na ọ bụ ihe ezi karịa nkezi nke puru omume ndị dabeere na ekwentị nnyocha ndị e mere.
E nwere isi ihe abụọ uru site n'ihe ọmụmụ banyere Wang na ibe. Akpa, unadjusted na-abụghị nke puru omume samples pụrụ iduga ọjọọ atụmatụ; a bụ ihe mmụta nke ọtụtụ ndị nnyocha nụrụ n'ihu. Otú ọ dị, nke abụọ ịmụta bụ na-abụghị ihe gbasara nke puru samples, mgbe dara nha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nwere ike n'ezie na-emepụta nnọọ mma atụmatụ e mere. N'ezie, ha kwuru bụ ihe ezi karịa atụmatụ ndị e mere site pollster.com, ihe aggregation nke ihe ọdịnala ntuli aka ntuli aka.
N'ikpeazụ, e nwere ihe dị mkpa na-agaghị emeli ka ihe anyị pụrụ ịmụta site na nke a otu ọmụmụ. Dị nnọọ n'ihi na post-stratification na-arụ ọrụ nke ọma na nke a karịsịa ikpe, e nwere mba nkwa na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ. N'ezie, ntuli aka bụ ikekwe otu n'ime ndị kacha ntọala n'ihi pollsters e amụ ntuli aka nke fọrọ nke nta 100 afọ, e nwere mgbe nzaghachi (anyị pụrụ ịhụ bụ ndị na-enweta nkwanye ntuli aka), na party njirimara na omume igwe mmadụ ji mara ndị dịtụ amụma nke ịtụ vootu. N'ebe a, anyị na-enweghị ihe siri ike tiori na ahụrụ anya ahụmahụ mara mgbe weighting mgbanwe na-abụghị ndị ihe gbasara nke puru samples ga-emepụta zuru ezu ezi atụmatụ. Otu ihe doro anya, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-amanye ịrụ ọrụ na-abụghị nke puru omume samples, mgbe ahụ, e nwere ike ihe mere kwere na iji ghọọ atụmatụ ga-aka na-abụghị gbanwee atụmatụ.